Mudanayaal Shirkado iyo Warshad - Soosaarayaasha Gabdhaha Shiinaha
Mudanayaal galoofyo maqaar adhi ah oo leh laba tolmo
Qaabka caadiga ah, Oo ka samaysan hargab adhi oo itoobiya ah oo jilicsan oo waara, kuna dahaadhan lacag caddaan ah, Iyo dhabarka oo lagu tolay laba tolmo, Waxay umuuqataa mid fudud oo dhadhan fiican leh.waxaa laga helaa dareen wanaagsan munaasabado badan oo min caadi ah ilaa labis ah!
Mudanayaal gacmeedyo maqaar gacmeedyo leh qaanso
Qaabka nolosha, Oo ka sameysan jilicsan oo waara oo itoobiya ah maqaar adhi ah, oo leh xariir xariir ah, Iyo dhabarka oo lagu xardhay qaanso, wuxuu umuuqdaa inuu ku noolaanayo dabeecadda .Xadhka xariirku wuxuu bixinayaa dareen wanaagsan oo gacmahaaga ah, Xirmo qurux badan marar badan!
Mudanayaal gacmo gashi maqaar adhi madow leh oo leh cognac cuff
Raaxo iyo galoofis casri ah, oo laga sameeyay harag adhi paihuang ah, oo lagu dahaadhay kaashmere, Jidh-jilicsanaanta, maqaarka hodanka ah ee maqaarka, moodhadhkii ugu dambeeyay iyo farsamo-yaqaannadii ugu sarreeyay. isku darka ugu fiican! Dharka ugu fiican ee loogu talagalay fanshion paty!
Raaxo iyo galoofis casri ah, oo laga sameeyay harag adhi paihuang ah, oo lagu dahaadhay kaashmere, Jidh-jilicsanaanta, maqaarka hodanka ah ee maqaarka, moodhadhkii ugu dambeeyay iyo farsamo-yaqaannadii ugu sarreeyay. isku darka ugu fiican! Cognac cuff iyo 3-dhibic oo dhabarka lagu tolayo, oo muujinaya wax aan caadi ahayn iyo indho qabasho.Waa dharka ugu fiican ee loogu talagalay taageerayaasha!
Mudanayaal galoofyo maqaar adhi ah oo aan dahaadh lahayn
Gacan-gashiyada wadista gacmo-gashiMadhig ah maqaar jilicsan oo kala-bixin kara, Gacmo-gashiyada waxaa lagu gartaa godad jilicsan oo jilicsan, suunka curcurka oo leh xiridda silsiladda Viscose. Ku habboon in la isticmaalo. Maqaar daloolsan iyo gadaal hawo leh ayaa bixiya awoodda ugu badan ee neefsashada iyo dabacsanaanta gacmahaaga.
Mudanayaal galoofyo maqaar adhi ah oo leh shan badhan gadaal
Ka samaysan maqaar adhi oo jilicsan oo raagaya ， Aad iyo aad u raaxo leh dheelitirnaan dabacsan oo si fudud loo isticmaali karo, ku siiso dareen wanaagsan gacmaha. Shaqada, fiidadka, ama dharka maalin kasta!
Mudanayaal gacmo gashiga gacmo gashi gacmo gashi leh
Mudanayaal galoofyo maqaar adhi ah oo leh 2 saf oo tol ah oo dhabarka gadaashiisa ah
Shaqada, fiidadka, ama dharka maalinlaha ah! Gacan-gashiani wuxuu ka samaysnaa harag adhi oo jilicsan oo raagaya comfortable Aad iyo aadna ugu raaxeysan dabacsan oo si sahlan loo isticmaali karo, Curcurka la xardhay, 2 saf oo tolnimo ah. U eeg qurux badan oo la jeclaan karo. Gacan-gashiani wuxuu si qurux badan u xirtaa sanadihii la soo dhaafay wuxuuna sii wadi doonaa inuu kuu adeego xilli xilliba xilli ka dambeeya.
Mudanayaal galoofyo maqaar adhi ah oo leh saddex saf oo tolmo gacmeed ah
Qaab Casri ah, oo ka samaysan hargab adhi oo itoobiya ah oo waara, oo leh silsilad xariir ah, Iyo dhabarka oo lagu sharaxay saddex saf oo tolmo gacmeed.
Mudanayaal galoofyo maqaar adhi ah oo wata Qurxinta maqaarka
Qaab Casri ah, Oo ka samaysan hargab adhi oo itoobiya ah oo jilicsan oo waara, oo leh xariir xariir ah, Iyo dhabarka oo lagu xardhay Suunka Hargaha, Ka dhig mid aad ugu habboon oo raaxo leh gacmahaaga.
Mudanayaal galoofyo maqaar adhi ah oo jiinyeer dhabarka ku yaal
Oo ka sameysan hargaha adhiga itoobiya ee jilicsan oo waara, kuna dahaadhan lacagta kaashka ah, Iyo dhabarka oo lagu sharraxay jiinyeer, Laba xabbo oo caleen caw ah, oo aad u caqli badan oo qurux badan. ku siiso dareen wanaagsan munaasabado badan laga bilaabo dharka caadiga ilaa dharka!
Mudanayaal galoofyo maqaar adhi ah oo leh tolmo qoyan
Nooca caadiga ah, Oo ka samaysan hargab adhi oo itoobiya ah oo jilicsan oo waara, kuna dahaadhan lacag caddaan ah, Iyo dhabarka oo lagu tolay tolmo ruxruxsan, Waxay umuuqataa mid fudud oo dhadhan fiican leh.waxaa laga helaa dareen wanaagsan munaasabado badan oo min caadi ah ilaa dhar!